Sistemụ Nlebanya na Sistemụ Nchekwa, China Sistemụ Nlebaanya na Ndị Na-emepụta Sistemu Nchekwa, Ndị Na-eweta, Ụlọ ọrụ - HNAC Technology Co., Ltd.
>lọ>Onye na-eweta ngwaahịa>Ngwa igwe na igwe eletrik zuru oke>Sistemụ Nlebaanya na Sistemụ Nchekwa
Ọdụ mmiri mmiri bụ ọdụ ọkụ na-agbanwe ike na ike nke mmiri ka ọ bụrụ ike eletrik. Usoro nleba anya na nchebe ọdụ ụgbọ mmiri bụ ngwa akụrụngwa nke na-enyocha, na-achịkwa ma na-echebe usoro ntụgharị ike a nke ọma.
Ọrụ bụ isi nke usoro nleba anya na nchedo nke ọdụ ụgbọ mmiri bụ iji nyochaa na ijikwa usoro nnyefe mmiri na ike mmepụta ike, akụrụngwa hydraulic na sistemu, ngwa eletriki na sistemu, ọnụ ụzọ iju mmiri na akụrụngwa hydraulic, wdg, iji hụ na ọrụ nchekwa, ịrụ ọrụ nke ọma na akụ na ụba nke ọdụ ụgbọ mmiri.
1. Usoro nleba anya nke ọdụ ụgbọ mmiri na-agụnye usoro nha, usoro mgbaàmà, sistemụ arụmọrụ na usoro nhazi nke ọdụ ụgbọ mmiri. Ka ọ dị ugbu a, a na-ejikarị usoro kọmputa eme ihe iji ghọta nlekota nke ọdụ ụgbọ mmiri.
2. Usoro nchebe nke ọdụ ụgbọ mmiri na-agụnye usoro mmiri mmiri, nchebe ngwá ọrụ na nchedo ngwá ọrụ eletrik, dị ka nchebe ọdụ ụgbọ mmiri, nchebe nke ngwa ngwa, nchebe oke ọkụ, nchebe mmanụ dị ala maka ihe mberede ngwaọrụ nrụgide mmanụ, na nchebe relay. ngwa eletriki.